Dhibaatada wasakheynta biyaha dhulkeena | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Ecology, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Deegaanka
Caadi ahaan, wasakheynta biyuhu waxay ku dhacdaa iyada oo si toos ah ama aan toos ahayn looga sii daayo ilaha biyaha (webiyada, badaha, harooyinka, iwm.) Waxyaabaha wasakhaynaya
Dabeecaddu waxay awood u leedahay inay is-nadiifiso haddii ay hesho qaddar yar oo wasakhda ah, oo sidan oo kale, dib ugu soo noqoto dheelitirka. Dhibaatadu waxay bilaabmaysaa marka wasakhdu ay dhaafto awoodda nuugista ee nidaamka.
1 Noocyada ugu muhiimsan ee wasakheynta biyaha:
2 Wasakheynta Badweynta
2.1 Saliida daadatay
2.2 Saamaynta xun ee Saliida Badweynta
2.3 Kahortaga iyo xakameynta wasakheynta badda ee Saliida
3 Wasakhaynta kheyraadka biyaha
Noocyada ugu muhiimsan ee wasakheynta biyaha:
Mid ka mid ah waa inuu ku sameeyaa isaga wareegga dabiiciga ah, inta lagu jiro taas oo ay la xiriiri karto qaybo ka mid ah wasakheynta (sida macdanta la baabi'iyay ama la hakiyay iyo walxaha dabiiciga ah) ee ka jira qolofka dhulka, jawiga iyo biyaha.
Laakiin nooc kale oo wasakheynta biyaha ah - oo u janjeera midka ugu muhiimsan uguna waxyeellada badan - waa mid xiriir gaar ah la leh ficilka aadanaha. Halkan waxaan ku haynaa fursado badan. Kuwa ugu caansan waxaan ka xusi karnaa:
Ka-daadinta walxaha sunta ah ee hadhay ee ka imanaya geeddi-socodka warshadaha iyo magaalooyinka, kuwaas oo lagu tuuro wabiyada, badaha iyo harooyinka.
Wasakhda ay soo saartay isticmaalka degdega ah ee sunta cayayaanka iyo bacriminta beeraha xoog leh, kuwaas oo ku dhaca biyaha hoostooda.
Qashinka lagu daadiyay xeebaha, nasiib daro qashinkani wuxuu qaataa boqolaal ama kumanaan sano in la xaalufiyo.
Adeegsiga shidaalka wasakhda ah ee doomaha, kuwaas oo ku dhammaada badda nadaafadda doomaha, ama shilalka ka dhasha, sida Hantida.
In kastoo aysan u ekaan karin, hadana waxaa aad muhiim u ah inaan ka feejignaano halista wasakheynta badda iyo in mahadaas aawadeed loo sii ilaaliyo noolaha badda noocya badan. waxay na siineysaa suurtagalnimada helitaanka oksijiin, isla ogsijiinta aad neefsaneyso.
El qashin ula kac ah qashinka, saliida daadatay, iyo noocyo badan oo kiimikooyin qalafsan ee lagu shubo sababaha bada faddarayntiisa kuma koobna oo kaliya dhirta iyo noocyada badda ee ku dhex nool laakiin sidoo kale waxay saameyneysaa dhammaan dadka aduunka
Xilligan brent waa kan ugu weyn khatar ku saabsan wasakheynta badda, tan iyo markii waxsoosaarka iyo daabulida shidaalka ay aad u kortay si loo daboolo baahiyaha dhaqaale ee hada jira.
Shidaalka ku daatay badda darteed, dhinto inta badan xoolaha dhex degan
Aynu sidoo kale ka fikirno wax kasta oo ay soo saarto batroolka, oo badanaa loo isticmaalo samaynta caagagga iyo wax soo saar kale oo badan, Nasiib darrose waxaas oo dhami waxay u muuqdaan inay ku dhammaanayaan salka badda.
Saamaynta xun ee Saliida Badweynta
Waxaa la sheegay in ka badan 80% wasakhda ka dhacda badaha ay tahay khaladkeena, asal ahaanna waxaa sabab u ah isticmaalka qaldan ee aan saliida u samaynayno.
Intaa waxaa dheer, dadaal badan oo xagga nadiifinta ah si looga takhaluso haraadiga saliidda ee ku jirta salka badda, waxaa la muujiyey in dhaawaca biyaha iyo noolaha bada ayaa sii soconaya ugu yaraan 10 sano. Marka la tixgeliyo xaqiiqda ah in ay jiraan dhowr saliid ah oo daadata sanad walba, tirada saameynta noocaas ah waa mid aad u xun.
Kahortaga iyo xakameynta wasakheynta badda ee Saliida
Marka barta wasakheynta badeed ee saliida darteed la helo, daraasado taxane ah oo aagga ah ayaa la sameeyaa si loo go'aamiyo hab maamuuska la raacayo, nadiifi gebi ahaanba. Hadday wasakhdu yar tahay, waxaad dooran kartaa inaad sugto inta ay si dabiici ah u milmayso, in kasta oo waxa ugu badan ee caadiga ahi yahay ka hortagga ka hor orodka.
Sababtaas awgeed, ka hortagga badda noocan ah waxaa badanaa laga sameeyaa doomaha ay siyaasadaha waxqabadkoodu yihiin sida soo socota:
Horumarinta heerarka farsamo ee loo adeegsado booyadaha
Kormeerka farsamada ee booyadaha
Xakamaynta taraafikada badda
Jawaabcelintu waxay ka dhigan tahay in laga hortago shilalka (xakamaynta munaaradaha, doonyaha waaweyn, iwm.)
Wasakhaynta kheyraadka biyaha
Bada kaliya maahan mida wasakhda hesha, runti dhibaato weyn ayaan ku qabnaa wasakheynta wabiyada iyo harooyinka.
Nasiib darrose, waxaa jira wakiillo badan oo wasakheyn kara wabiyada iyo harooyinka. Tan ugu muhiimsan waxay noqon doontaa:
biyaha bullaacadaha iyo haraaga kale ee dalbanaya ogsijiinta (kuwaas oo inta badan ah maaddo dabiici ah, oo kala-baxoodu soo saaro sunta sunta ah ee biyaha).
Wakiilada faafa taas oo ku dambaynaysa xanuunno caloosha ku dhaca iyo xitaa cudurro aad u xun oo ku dhaca kuwa cabba biyahaas (daacuun, ...)
Nafaqada dhirta Waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo koritaanka dhirta biyaha ku jira, oo aakhirka ku kala baxa, baabi'iya oksijiin kala daadsan oo sababa wax ka badan ur aan fiicnayn.
Alaabada kiimikada, sida sunta cayayaanka, waxsoosaarka warshadaha kala duwan, walxaha kiimikada oo ku jira saabuun, saabuun iyo waxsoosaarkii ay ku burbureen xeryahooda kale ee dabiiciga ah
Macdanta aan dabiici ahayn iyo iskuulada Kiimikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Wasakhaynta Biyaha
Sannadkii 2015-kii Isbaanishku wuxuu hoos u dhigay isticmaalkiisa la cusboonaysiin karo 3%